Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta oo bilaabay Olole ka dhan Hay’adaha Dowlada (Qormo) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta oo bilaabay Olole ka dhan Hay’adaha Dowlada (Qormo) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta oo bilaabay Olole ka dhan Hay’adaha Dowlada (Qormo)
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Cabdi Sheekh Axmed ayaa bilaabay olole ka dhan ah madaxweynaha iyo raysal wasaaraha, iyo maareeyaha cusub ee hayada tayadhowrka.
Wasiirka oo arrintan u adeegsanaya wiil xafiiskiisa ka shaqeey, ujeedka laga leeyahay ay tahay in la suurad xumeeyo maareeyaha cusub ee la magacaabay iyo shirkadda ku guuleysatay taya-dhowrka dalka.
Wasiirka iyo shaqaalaha xafiiska ee ay isku dhow yihiin ayaa ciil u qaba Raysal wasaaraha kadib markii uu ka diiday magacaabiista uu wasiir Cabdi Sheekh u rabay inuu Cabdixakiim Caseyr u magacaabo hayada Isgaarsiinta qaranka, ninkaas oo ay isku jufo yihiin wasiir Cabdi Sheekh, sidoo kalena uu u soo dhiibay maamulaha shirkad isgaarsiineed oo isagana iyaga ku jufo ah.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa hore u diidey in uu magacaabo shakhsigan, kadib markaw ogaaday:-
Inu Wasiirku lacag uga qaatay mid kamid ah shirkadaha Isgaarsiinta dalka.
Lagu soo xuley in uu qaraabo dhow la yahay Wasiirka (jufo hoose). Waxaa haboon in wasiirka iyo maareeyaha hay’ad hoos tagta aysan isku beel noqonin.
In uusan wax aqoon ah u laheen Isgaarsiinta iyo tiknolojiyada maadama ay hay’adani tahay Hay’ad Farsamo.
In ay cabasho ka keeneen qaar ka mid shirkadaha Isgaarsiinta oo aysan cadaalad aheen in la magacaabo Maareeye ay wadato shirkad gaar ah.
Fashikla wasiirka wuxuu keenay inuu ka tago dalka, isagoo dalka dibeda uga maqan in ka badan 40 maalmood. Hase yeeshee wuxuu shaqaalihiisa u soo dhiibaya olole ka dhan ah beelo, shirkado iyo masuuliyiin la magacaabay.
Dhowaan ayay ahayd markii shaqaale ka tirsan Wasaaradda ay cabasho ka soo gudbiyeen wasiirka ay ku eedeynayaan in Wasiirku ka aaminsanyahay Wasaaradda in ay tahay wax ay beeshiisa saami u
W/Q: Maxamed Cali Nuur
Qaar ka mida Shaqaalaha Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo Dacwad ka gudbiyey Wasiirka